Sibheka isethulozimali sikaNgqongqoshe Wezezimali - Bayede News
Bakhala bayazithulisa abeGreenwood Park ngeNedbank Cup
NgoLwesithathu mhla zingama-24 kuNdasa uNgqongqoshe Wezezimali, uMnu uTito Mboweni ubeke isethulomali ezweni. Bekuyisethulomali sonyaka lesi esenziwe ngaphansi kwesimo ebesinzima kakhulu ngenxa yokhuvethe olusakhungethe leli lizwe. Eqhulwini uqale ngokuzwakalisa uzwelo analo ezihlotsheni nasemindenini yabantu abacishe babe yizinkulungwane ezingamashumi amahlanu asebelahlekelwe yimiphefumulo yabo. Lokhu kube umuzwa obuzohambisana nomongo wenkulumo ebemfushane kepha yadla ngokuqina.
Uma esengena engqikithini yenkulumo yakhe ucacise ngethemba analo ngeNingizimu Afrika, athe ingeke ikwazi ukuguqiswa yilutho nxa kubhekwa futhi kuqhathaniswa izimo izwe eselike labhekana nazo ngaphambilini. Egcizelela lokhu, ucacise ukuthi lolu lwabiwomali luzobhekelela kakhulu ezempilo lube futhi lusiza ukusekela ezomnotho, ngasikhathi sinye luqinisekisa ukuphathwa ngendlela yezimali zikaHulumeni.
Kunyakamali wezi-2021/22 uzodinga imali elinganiselwa kusigidintathu owo-R1.35, okungamaphesenti angama 25.3 uma siqhathanisa nomqukuthu owakhiwa yiNingizimu Afrika ngomnotho, okanti wona ulinganiselwa kusigidintathu oyisi-R5.5. Besekuthi ngonyaka wezimali ozolandela, okungowezi-2023/24, izonyuka le malisidingo ifinyelele kusigidintathu owo-R1.56 ngokombiko omaphakathi wezimali.
Embikweni wamaphakathi wezezimali wakamumva, uNgqongqoshe ubeke wamemezela ngaphambilini ukuthi ngenxa yesimo sokhuvethe oselulethele leli isimo esasingaziwa muntu, kuyomele leli lizwe libheke izindlela zokuthi lingandisa kanjani izimali ngokuthi lelekelele emalini okuvele abakhokhintela beyikhokha.
Nxa ememezela lokhu ngaphambilini uNgqongqoshe. Lesi simemezelo saletha esikhulu isikhalo sivela ezimbonini nakubantu baseNingizimu Afrika jikelele. Le mali eyabe izoba yizigidigidi ezingama-R40. Ube esememezela ukuthi uzoyihoxisa ngenxa yezimo zengcindezi ezikhona.
Izithebe uzikhiphe kanje
Imali eyizigidigidi ezili-R10 yabelwe ikhambi lokhuvethe eminyakeni emibili ezayo. Ubuye wenyusa imali ebekwe ecaleni eyizigidigidi ezi-R5 yaya kwezili-R12 ebhekele njalo belu izigameko zokhuvethe ezingase zibe khona njengoba lilokhu likhona leli gciwane emkhathini, futhi lisalokhu liziveza ngezindlela ezahlukene.
Yize ezamile ukuba neqiniso uMboweni ngodaba lokuthi iNingizimu Afrika isenkingeni enkulu yokuthi ikweleta amazwe amaningi angaphandle, amabhange akuleli, izizinda ezibolikisa ngemali kaHulumeni nabantu bakuleli abathenge amabhondi, wakubeka futhi ukuthi leli lisenkingeni enkulu yokuthi kumele ngonyaka wezi-2025/26 likwazi ukwehlisa isikweletu eseseqa amagalane asibeke kumaphesenti angama-88.9 esikalo sezimali zezwe.
Kule nkulumo ukwazile futhi ukuthi acacise ukuthi leli selikweleta cishe usigidintathu o-R3.95 kulo nyaka wezimali,okanti eminyakeni emibili elandelayo okungowezi- 2023/24 lizobeselikweleta usigidintathu oyisi-R5.2. Lokhu kusho ukuthi leli lizobe selikweleta cishe ama-95% emali eliyenzayo.
Yize iningi lale mali liya ekuletheni usizo kubantu abahluphekayo, abezibonelelo, nabadinga ukusizakala ngezindlela ezahlukene eNingizimu Afrika, lokhu kuletha umthwalo omkhulu kwezezimali ezweni. Nxa sekukhokhwa lesi sikweletu. Lokhu kugcina kuthatha imali eyezigidigidi okumele ngabe isiza izwe, kunalokho iyokhokhela labo abasuke bekweletwa.
Kuzokhumbuleka ukuthi leli seliqenqeleza phambili ngamaphesenti angama-32.5 wabantu abangaqashiwe. Izingane ziqede izikole nje, kusazoba usizi lodwa ngenxa yokungabikho kwamathuba omsebenzi. UNgqongqoshe akha umkhanya waleli kwezomnotho lapho aqale abheka izinkomba ezibonisa ukuthi umnotho womhlaba jikelele uzokhula cishe ngamaphesenti ama-5.5 ngaphambi kokuzinza kwama-4.2 ngowezi-2022. Besekuthi iChina yona izokhula ngamaphesenti ayisi-8.9 i-India yona ngayili-11.5. Izwekazi i-Afrika lona litshengisa ukukhula ngamaphesenti ama-3.2.
Zonke lezi zinkomba zinika ithemba lokuthi iNingizimu Afrika nayo izokhula cishe ngamaphesenti ama-3.3.
Uthintile kakhulu futhi nasesigabeni sokukhulisa umnotho ngokunweba imikhawulo yawo, ukususa izithiyo ezenza ungakhuli. Lokhu okusesigabeni se-Operation Vulindlela, ukubeke njengento okumele mayisize ukukhulisa umnotho ze ikwazi ukwelekelela ukumumatha abantu abaningi ezweni. Lokhu kuhambisana nokusiza imifakela nezintuba ezixhuma leli namanye amazwe. NjengeBeitbrigde esidinga okukhulu ukuthuthukiswa kwazise ayixhumi leli lizwe kuphela neZimbabwe, kepha iphinde ilixhumanise namazwe amaningi asezwenikazi i-Afrika.
Akumangalisi ukuthi uHulumeni uzobeka eceleni imali eyizigidigidi ezingama-R791.2 ukuze ubhekelele yonke ingqalasizinda. Ngenxa yokuthi angeke uHulumeni ukwazi ukuwenza yedwa lo msebenzi. Ukucacisile uNgqongqoshe ukuthi uzosebenzisana nezimboni ezizimele ukufezekisa lo msebenzi. Nokho udinga ukuthi abantu bathembeke ekukhokheleni izidingo zikahulumeni.
Emiphakathini nokwakhiwa kwemisebenzi ubeke kanje
Kuzosetshenziswa usigidintathu oyisi-R6.2 ngokubhekelela ikusasa lezwe ekuthuthukisweni kwengqalasizinda eyothi ikwazi ukubhekelela leli ngokuzayo, kumele kwazeke ukubhekelela ukuthuthukiswa kwezomnotho jikelele. Kulolu hlangothi uphawulile futhi ngobumqoka bokusebenzisana kukaNgqongqoshe uSenzo Mchunu ekuxoxisaneni nezinyunyana maqondana nokwenyuswa kwamaholo ezisebenzi. Le ngxoxo kumele ibe ngephusile phakathi kwezisebenzi noHulumeni, kwazise isimo simazonzo, kanti futhi kungagcina kumele izisebenzi zikhethe ukuthi imali yazo iyenyuswa yize kunje, noma kudilizwa izisebenzi ukuze kubonelelwe labo abafuna ukwenyuselwa imali.
Phakathi kolunye uhla lohlahlomali ucacise ukuthi imali eyizigidigidi ezingama-R83.2 eyokuqashwa kwabantu; izigidigidi ezili-R11 eyohlelo lukaMengameli lokuthuthukisa intsha. Lokhu kubeka imali ezongenelela emnothweni emthamweni oyizigidigidi ezili-R100.
Emapulazini ayi-1 409 azobuyiselwa kwaboHlanga, uHulumeni ubeke eceleni imali eyizigidigidi eziyisi-R9.3 ezokhokhelwa abelungu abasazitika ngomhlaba waboHlanga nanamuhla. Besekuthi uMnyango Wezolimo Umhlaba, Ukuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya wona uzosebenzisa imali eyizigidi ezingama-R896.7 ukuletha izinsiza emuveni kokubuyiselwa komhlaba ebantwini.
Ibhange lezomhlaba lona lizothola izigidigidi eziyisi-R7, lokhu ngenkolelo yokuthi kuzokwazi ukuletha uzinzo nokubonelela aboHlanga ekucosheni nabo le mali okumele iphume kuleli bhange.
UMnyango Wezosomabhizinisi Abancane wona uzothola imali eyizigidigidi ezi-R4 ukuze ukwazi ukusiza amadlandawonye kanye namabhizinisi amancane.
Ucacise ukuthi ukuqoqwa kwemali kubakhokhintela kuzokwehla ngezigidigidi ezili-R123 kuya kusigidintathu owo-R1.21 kophezulu.
Ukwehla okukhulu kakhulu okungakaze kwenzeke lokhu ngaphambilini. Kuzothi ngozayo unyaka, akwazi ukuqoqa cishe usigidintathu owo-R1.37.
Kube sekuba izimemezelo ezijwayelekile zokwehliswa kwentela yezinkampani iya emaphesentini angama-27.
Kuzobe sekuphinda kunwetshwe ngamaphesenti amahlanu isigaba salabo abahola kancane. Lokhu okusho ukuthi cishe izigidigidi ezi-R2.2 zizobuyela emakhukhwini alabo abahola kancane.
Intengo kaphethroli izonyuka ngamasenti angama-27. Ukwenyuka kotshwala ngamaphesenti ayisi-8. Kanjalo neziphuzo ezidakisayo ezahlukahlukene kanye nogwayi ngokushiyana kwabo.
Ekuhlahleleni izimali uHulumeni ophezulu uyena ohlumula kakhulu ngamaphesenti angama 48.7, alandelwe oHulumeni Bezifundazwe ngama-41.9 bese kugcina oHulumeni Bendawo ngamaphesenti ayisi-9.4 wemali kaHulumeni.
Kuyobhekelwa kakhulu uMnyango Wezempilo ngemali elinganiselwa ezigidigidini eziyisi-R8 ngenxa yokhuvethe.
Kanti futhi uNgqongqoshe uqinisekisile ukuthi iNingizimu Afrika izoqhubeka nokubamba iqhaza elikhulu esivumelwaneni esike sakhuluma ngaso kule ngosi ngaphambilini sohwebelwano nezwekazi i-Afrika i- AfCFTA.